KIWI တစ်ဦးကို VIRTUAL မြေပုံကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို - QIWI - 2019
တစ်ဦးကို virtual ကဒ် QIWI ပိုက်ဆံအိတ် Creating
လူမှုကွန်ယက်ကို VKontakte မှာတော့များစွာသောအခြားအလားတူအရင်းအမြစ်များကိုကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, သာအခြို့သောပြုမူသောအမှုကော်မရှင်အတွက်ရရှိနိုင်ပါက hidden features တွေရှိပါတယ်။ ရုံထိုကဲ့သို့သောနောက်ထပ် features တွေအဘို့အချိန်အတွက်အထူး VK ကနဦးက hidden ရုပ်ပြောင်များပါဝင်သည်။
ပထမဦးဆုံးအကြောင်းချက်ချင်းလူမှုကွန်ရက် site ပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာသော graphical user interface ကိုပေါ်လာပါဘူးဒါကြောင့်နီးပါးတိုင်းဝှက်ထားအပြုံး, စမ်းသပ်မှု mode မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးမှတ်စု၏။ ထို့အပြင်စီကူးယူအပြုံးမျက်နှာတသမတ်တည်းမသက်ဆိုင်ဆိုဒ်၏ဗားရှင်းမဆိုသင့်လျော်သောနေရာအရပ် VKontakte ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီ link မှာဝှက်ထားသောအပြုံးများနှင့်အတူဆိုက်၏အဓိကစာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်။
ဤဝန်ဆောင်မှုကို main menu ကိုနှင့်တကွ, အပိုင်းသို့ပြောင်းရန် "အီမိုဂျီ Editor ကို".
, ရုပ်ပြောင် menu က sort သငျသညျအီမိုဂျီစိတ်ဝင်စားအမျိုးအစားကိုရွေးပါ, ဥပမာဖို့အထူးအညွှန်းအသုံးချဖို့အသုံးပြုပုံ "နယူး".
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတင်ပြရုပ်ပြောင်စာရင်းထဲက, သင် VKontakte သုံးပါကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါချင်တဦးတည်းကိုရွေးချယ်ပါ။
လက်ျာဘက်၌သေတ္တာတွင် "အပြုံးများ၏အမြင်အာရုံအယ်ဒီတာ ... ", အီမိုဂျီအလိုရှိသောခံရဖို့ထင်ခဲ့သည်ဘယ်ဟာ, ခလုတ်ကိုနေရာချထား "Copy ကူး" ထိုသို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒါ့အပြင်သင်ဖြတ်လမ်းသုံးပြီးအီမိုတီကွန်ကူးယူနိုင်ပါတယ် "ကို Ctrl + C ကို"ယခင်ကဆိုပါတယ်စာသားကို string ကိုရဲ့ contents ရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်။
ဝက်ဘ်ဆိုက် VKontakte သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးအပြုံးမျက်နှာထည့်သွင်းချင်ရှိရာပုံစံကိုချဲ့ထွင်။
သငျသညျရုပ်ပြောင် add ဖို့လိုအပ်ဘယ်မှာဖျော်ဖြေမှု, ရုပ်ပြောင်တစ်ဦးစံသတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်းများအတွက်စံ interface ကိုတပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
သော့ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်း "ကို Ctrl + V ကို"တစ်ဦးသင့်လျော်သောအရပ်ဌာန၌သင့်လျော်သောလယ်ပြင်၌ယခင်ကကူးယူရုပ်ပြောင် Paste ။
ဤအမှုအလုံးစုံကို, သင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်တစ်ခါတစ်ရံဖော်ပြထားဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအလုပ်၏သင်တန်းတွင်, သငျသညျအကြောင်းအရာများ၏မှန်ကန်သော display ကိုအတူအခက်အခဲများတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်ကဆိုက်နှင့်နှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး။ ကံကောင်းပါစေ!
https://termotools.com my.termotools.com © Qiwi 2019